Achọpụtara ihe egwu dị na ekwentị, kọmpụta na teknụzụ n'ụwa niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Achọpụtara ihe egwu dị na ekwentị, kọmpụta na teknụzụ n'ụwa niile
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Technology • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụghị naanị na Saudi Arabia na-abụ onye ndu na njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-adọta ndị otu, atumatu inwe isi ụlọ na alaeze, mana King Abdulaziz Center for World Culture na-enwekwa nchegbu banyere mmetụta teknụzụ ọhụrụ nwere n'ahụ ọgụgụ isi mmadụ- ịbụ, na maka ezinụlọ.
Dika ụwa na-agbakwụnye eziokwu na-esote ọrịa na-efe efe na-achịkwa, nchegbu ọha na eze gbasara ihe egwu dị na ịribiga ihe ókè na-agbakọ ọnụ.
Dabere na nnukwu nyocha ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ ọdịbendị nke Saudi Arabia, Ithra, ihe fọrọ nke nta ka ọkara (44%) nke mmadụ niile na-echegbu onwe ha maka mmetụta ịntanetị na iji ekwentị na ahụike ha.
Na mmemme iji malite mmemme ọdịmma dijitalụ ha - mmekọrịta, Ithra kwupụtara atụmatụ maka ọgbakọ zuru ụwa ọnụ kwa afọ, nke a ga -eme na Disemba.
Dabere na nyocha ahụ, imirikiti mmadụ (88%) nke ndị na -aza ajụjụ n'ụwa niile kwenyere na teknụzụ nwere ike bụrụ nnukwu ike maka ọganiihu, yana nnukwu uru gụnyere ịnweta ozi, njikọta na nnwere onwe.
Ihe ntiwapụ COVID-19 butere ọtụtụ n'ime uru ndị a, yana teknụzụ nzere 64% nyere aka ịlụso ọrịa a ọgụ. Agbanyeghị, ihe ga -esi na ya pụta bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile (91%) na -etinye oge dị ukwuu n'ịntanetị.
Abdullah Al-Rashid, onye isi mmemme mmemme ọdịmma dijitalụ nke Ithra na -ekwu, sị: “Dị ka nzukọ ewepụtara maka ịba ọgaranya n'otu n'otu, anyị na Ithra chọrọ ịghọta mmetụta ọdịbendị nke ịdabere na -arịwanye elu nke mmadụ na ịntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ ihe nwute, nyocha anyị na-egosi na ọkara nke mmadụ niile kwenyere na ịdabere karịa na nyiwe ndị a na-emebi ọdịmma ha.
Nke a bụ ihe mere anyị ji amalite mmekọrịta - atumatu ohuru emere iji bulie mmata banyere ọdịmma dijitalụ, kwado nyocha ọhụụ na mmekorita ya na ndị otu ụwa, ma jikọta ndị isi echiche ụwa niile ịchọta ụzọ ọhụrụ iji chebe ọha. "
Ike dị ike maka ezi ihe!
Na -ewe iwe site n'ịbawanye nchegbu
N'agbanyeghi ezigbo ihe kpatara nke a, nchọpụta Ithra na -egosipụta nchegbu dị oke mkpa gbasara mmetụta na -emebi ihe nke nnweta a na -enyochaghị:
N'usoro nke mmekọrịta, 42% nke ndị zara ajụjụ kwenyere na teknụzụ na -ebelata oge anyị na ndị anyị hụrụ n'anya, na ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ (37%) na -ata ya ụta maka imebi ahịrị dị n'etiti ọrụ na ndụ mmadụ. A na -emetụtakwa nne na nna, ebe 44% nke ndị nwere ụmụaka kwetara ịhapụ ha ka ha jiri kọmputa ma ọ bụ ekwentị ejighị ya. Onu ogugu a kariri na North America (60%) na Europe na Central Asia (58%).
Na -atụgharị na mmetụta teknụzụ na ahụ ike, ọkara (44%) nke mmadụ niile na -ekwu na ọ gbasara ha. Ndị na-aza ajụjụ na Sub-Saharan Africa na South Asia yiri ka ọ na-echegbu onwe ha, ebe 74% na 56% na-atụ egwu nsonaazụ ọjọọ ịntanetị na ọdịmma, ma e jiri ya tụnyere naanị 27% na Europe na Central Asia. N'ikwekọ na mmụba nke otu ahụ na -abawanye, ndị na -eto eto na -enwe mgbaàmà anụ ahụ karịa ndị okenye ha: 50% nke ndị na -aza Gen Z na -eme mkpesa maka ike ọgwụgwụ, ụra adịghị mma na isi ọwụwa n'ihi oriri dijitalụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (48%) nke ndị na -aza ajụjụ na -etinye oge dị n'ịntanetị karịa ka ha chọrọ, ebe 41% kwetara na ha ga -enweta mgbaàmà mwepu na -enweghị ohere na ngwaọrụ ha. Ihi ụra bụ okwu dị mkpa, ebe 51% nke ndị na -aza ajụjụ na -amali ụra kwa izu, na otu n'ime anọ (24%) kwa ụbọchị, iji teknụzụ.
Nkwenye maka ibute ọdịmma dijitalụ ụzọ
N'ịmara mmetụta mmetụta ndị a nwere ike ịdịte aka, Ithra na-akwado mmemme mbinye aka- mmekọrịta - ịkwado na ịkwalite mbọ iji bute ọdịmma dijitalụ ọha ụzọ.
Nke a gụnyere mkparita uka na Disemba 2021, na -akpọkọta ndị isi echiche ụwa, ụlọ ọrụ, ndị na -eme ihe, na ọha iji mata mmata banyere ọdịmma dijitalụ, wee wepụta echiche ọhụrụ iji chebe ndị ọrụ mgbasa ozi dijitalụ n'ụwa niile.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, gaa na https://sync.ithra.com/
Eze Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) bụ otu n'ime ebe ọdịbendị kacha emetụta na Saudi Arabia, ebe ndị na -achọ ịmata ihe, ndị okike na ndị na -achọ ihe ọmụma. Site na usoro mmemme dị egwu, ihe ngosi, ihe ngosi, ihe omume na atumatu, Ithra na-emepụta ahụmịhe klaasị ụwa n'ofe mmekọrịta ọha na eze. Ndị a na -ejikọ ọdịbendị, imepụta ihe ọhụrụ, na ihe ọmụma n'ụzọ e mere nke ga -amasị mmadụ niile. Site na ijikọ ihe okike, echiche na -ama aka na ịgbanwe echiche, Ithra ji mpako na -akpali ndị ndu ọdịnihu. Ithra bụ atụmatụ flagship CSR nke Saudi Aramco na ebe ọdịbendị kachasị na alaeze, gụnyere ụlọ nyocha, ọba akwụkwọ, sinima, ụlọ ihe nkiri, ebe ngosi ihe ngosi, ihe ngosi ike, nnukwu ụlọ nzukọ, ebe ụmụaka ụmụaka na ụlọ elu Ithra.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma, biko gaa na: www.ithra.com.